Ngwa AMP na AMP ndụ ndepụta ọrụ - IG
AMP nkwụnye na AMP ndụ ndepụta ọrụ
(!! Nwa oge agbanyụọ !!)
Onye na -emepụta Accelerated Mobile Pages (AMP) iji mepụta ibe Google AMP , plugins AMP na onye na -emepụta mkpado AMPHTML na -eji ọrụ ndepụta AMP ma rụọ ọrụ mmelite data na -akpaghị aka na ibe AMP ọ bụla.
<amp-live-list> -Mkpado njikọ
Ihe ngwanrọ Accelerated Mobile Generator na -emepụta ụdị AMP na akpaghị aka melite ọrụ site na iji akara <amp-live-list>. N'ụzọ dị otú a saịtị saịtị AMP niile nwere ụdị ọrụ ntanetị dị ndụ.
Ọ bụrụ na onye ọrụ elee anya ụdị AMP nke webụsaịtị yana enwere atụmatụ ọhụrụ maka ibe AMP a ka ọ dị ugbu a, ibe AMP na-achọpụta na ụdị ọhụrụ, nke kacha ọhụrụ dị.
Peeji AMP na-agwa onye ọrụ nke mmelite ederede dị ugbu a mgbe ị na-agụ ihe, na-enweghị onye ọrụ ga-weghachite peeji AMP!
A na-egosi onye ọrụ bọtịnụ maka ebumnuche a. Ọ bụrụ na onye ọrụ pịa bọtịnụ mmelite akụkọ AMP, ụdị AMP ọhụrụ na-ebu ozugbo na ọsọ AMP maara nke ọma! Nke a na-eme ka oge nbudata dị mkpụmkpụ karịa iji nbugharị zuru oke ma na-eme ka onye ọrụ na-eme ka ọ dị ọhụrụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji AMP mee tickers dị ndụ.
Ihe ngwangwa nke Accelerated Mobile Generator na -emepụta peeji AMP nke na-eziga arịrịọ na sava peeji AMP (dịka sava Google) ọ bụla 16 sekọnd ma lelee ma ụdị isiokwu ọhụụ dị. Ọ bụrụ na ụdị ederede ọhụụ dị, peeji AMP na-egosi onye ọrụ ọkwa mmelite AMP n'ụdị bọtịnụ melite edemede.